Isisityebi kwaye kulula ukuyilungiselela ikhekhe yeyogathi kunye nelamula | Ukupheka kweKhitshi
I-yogurt kunye nekhekhe lemon
UMontse Morote | 29/04/2021 09:05 | Ukupheka
I-yogurt kunye ne-lemon sponge cake, yeklasikhi phakathi kwamaqebengwane esiponji, alula kwaye atyebile kakhulu. Le recipe yenye yezona zinto zilula ukuzenza ukusukela ngeglasi yeyogathi siza kuyisebenzisa njengenyathelo lokubeka izithako zekhekhe.
Ilamuni ilungele iidessert, ukuchukumisa iasidi kunika incasa elungileyo. Kumaqebengwana i-flavour kukuba ithambile, kodwa ngaphandle kweyogathi yelamuni ungongeza i-zest ye-lemon, oku kuya kuphucula incasa yeyogathi kunye nekhekhe lemon.
Ukwenza ikhekhe, umlinganiso weiglasi uya kuba yileyogathi.
1 iyogathi yelamuni
Iiglasi ezi-3 zomgubo
Iiglasi ezi-2 zeswekile
1 iglasi yeoyile kajongilanga
1 sachet yegwele
ibhotolo ukusasaza ukungunda
Ukulungiselela ikhekhe yeyogathi kunye nelamula, siqala ukulungiselela izithako. Bamele babe kubushushu begumbi, ke kuya kufuneka sibalungiselele malunga nemizuzu eli-15 ngaphambili.
Sithatha iyoghurt yelamuni kwiglasi, siyihlambe kwaye siyisebenzisele imilinganiselo.
Silayita i-oveni ngo-180ºC ngobushushu phezulu nangaphantsi.
Kwisitya sibeka amaqanda kunye neswekile esiyixuba nezinye iintonga.
Sifaka i-yogurt kunye ne-lemon zest. Siyaxuba.
Yongeza ioli, xuba kakuhle.
Ukongeza umgubo, kuqala siwuhluze kunye nemvulophu yegwele.
Siyongeza kancinci kancinci kwaye sixubeka, ngoluhlobo, de yonke umgubo udityaniswe kakuhle.
Sasaza isikhunta sebhotela kunye nomgubo omncinci, yongeza yonke i-cake batter kwaye uyibeke ehovini kwindawo esembindini.
Siza kuyishiya malunga nemizuzu engama-40, isenokwahluka ngokuxhomekeke eziko. Xa sibona ukuba yiyo siyakuyihlaba ngenqatha, ukuba iphuma yomile iya kuba ilungile ukuba asiyishiyi ithutyana de ibe ilungile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izitya » Ukupheka » I-yogurt kunye nekhekhe lemon
Iisoseji kwiwayini emhlophe